Ameerikaa: Tarjkaanfii Tarkiin Siriyaarratti fudhatteef qoqqoobbiin taasifamu qabaata - BBC News Afaan Oromoo
Ameerikaa: Tarjkaanfii Tarkiin Siriyaarratti fudhatteef qoqqoobbiin taasifamu qabaata
Miseensoonni mana maree bakka bu'oota paartii rippaabiliikaan Ameerikaa haleellaan Tarkiin Siriyaarratti banteef qoqqobbiin akka irra kaa'amuuf wixinee qopheessaa jiraachuusaanii ibsaniiru.
Miseensi mana maree kan ta'an Liiz Cheenii akka jedhanitti, "Halleellaa gara laafna tokko malee michoota keenya warra Kuurd irratti banuuniif tarkaanfii jabaan irratti fudhatamu qabaata" jedhaniiru.
Tarkiin erga pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp waraana baasuu himanii booda guyyaa Roobii ture kaaba Siriyaatti kan sochoote.
Qeeqxoonnis achi bahuu waraana Ameerikaa tarkiidhaaf daandii banuusaa dubbatu.
Karoorri qoqoobbichaa mmaal ta'a laata?
Manna maree warri diimookiraatotaataan qabame keessatti gareen warri riippaabiliikaan miseensoota 29 qabu Tarkiirratti qoqqobbii ka'uuf qaba jechuun seeraa baasuu himaniiru.
Kurdoonni Ameerikaan loltotashee baasuttu aaran
Dubbiin miseensota mana marichaa kan dhagahame eerga Doonaald Tiraamp dhimmicharratti yaada jaarumsaa qaban ibsaniin booda.
"Tarkiin michuu Ameerikaa ta'uun akka ilaalamtu yoo barbaadde, amalashee sirrirreessuu qabdi," kan jedhan Cheeniin "Tarkiin michuuwwaan keenyarratti haleellaa banuusheetiin qoqqobbiin irra kaa'amuu qaba" jedhaniiru.
Mr Cheeniin itti dabaluunis, ''Kongarsiin waa'ee bulchiinsa Erdogaan diinoota Ameeriikaa kanakka Ruusiyaa faana waltii dhufeenyi qabu yaaddoo bara dheeraa qaba'' jedhaniiru. Waa'ee bahiinsa waraana Ameerikaa ilaalchisee kan eeran garuu hinjiru.
''Pirezidaanti Tiraampi Tarkiin sarara Siriiyaa kan ceetu yoo ta'e, guttummaatti dinagdee Tarkii kan miidha ta'u ifaa taasisaniiru. Seerri kunis Ameeerikaan waadaa isheerratti akka hojjattuuf carraa gaarii kennaaf'' jedhu bakka bu'aan Joodee Aringitan akka barreessanitti.
Naannoo daangaa kana kan to'ataa turaan humnoota waraanaa Kuurdii yoo ta'an, Tarkiin "shorarkeessitootaa" jechuun qeeqxiin ture.
Rusiyaan waa'ee Sooriyaarratti Ameerikaa akeekkachiiste
Humni waraanaa Adda Diimookiraatawaa Siriyaa jedhamuun beekamu michuu Ameerikaa kan ture yoo ta'u, Ameerikaan naannichatti IS akka haleeltuuf qaama gargaaraa kan tureedha.
Murteen Ameerikaan amma dabarsite kun ammoo michuummaasaanii ilaalcha keessa kan hin galchinee fi "daba duubaan hojjatameedha" jechuun dubbatamaa jira.
Kunis Tarkiin lammata IS naannichatti akka deebi'ee hin dhufnee fi Kuurdoota adda baasanii haleeluun haleellichis aakka gara balleessaa sanyummaa hin taane sodaatamaa jira.
Doonaald Tiraamp gama isaaniiti humnoota waraanaa Ameerikaa achii baasuun isaanii murtee sirriidha jedhaniiru. Dubbiin isaanii tokkorratti warroonni Kuurd "waraana addunyaa lammaaffaarratti nu hin gargaarre" jedhanii turan.
Turkii-Siriyaa: Kurdoonni Ameerikaan loltotashee baasuttu aaran
Tiraamp dhimma Kurdoota Sooriyaa ilaalchisee dinagdeeshee miidhuu akka danda'an Tarkii akeekkachiisan
Waraana Sooriyaa: Buufanni xayyaaraa Sooriyaa haleelamuu, miidiyaan biyyattii gabaase
9 Elba 2018
Ameerikaa fi Meeshaa waraanaa
'Haleellaa keemikaalaa' Sooriyaa: Raashiyaan waa'ee Sooriyaarratti Ameerikaa akeekkachiiste
11 Elba 2018